Florian Thauvin iyo Charlotte Pirroni, Refaeli Bar, Alexandra Rosenfeld ... kuwa ugu fiican Instagram ee isbuuca - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Florian Thauvin iyo Charlotte Pirroni, Bar Refaeli, Alexandra Rosenfeld ... kuwa ugu fiican Instagram ee isbuuca
Florian Thauvin iyo Charlotte Pirroni, Refaeli Bar, Alexandra Rosenfeld ... kuwa ugu fiican Instagram ee isbuuca
Sidii caadiga ahayd, dadka caanka ah ayaa daadadiyay shabakadaha bulshada iyaga oo adeegsanaya sawirro kala duwan toddobaadkan mar kale si ay ugu farxaan dadka isticmaala internetka. Xiddigaha dumarka waxay umuuqdeen inay gudbeen ereyga usbuucan maadaama ay aad u badnaayeen si ay u dhajiyaan uurka ay leeyihiin Instagram. Tusaale ahaan boqoradda quruxda hore, Charlotte Pirroni, iyo saaxiibkiis, Kubadda cagta Olympique de Marseille Florian Thauvin, wuxuu ku dhawaaqay inuu filanayo dhacdo faraxsan.
Dhinaciisa, Bar Refaeli wuxuu u soo bandhigay taageerayaashiisa caruurtiisa quruxda badan. Gabadha yari waxaa lagu soo bandhigay galmo aad u sexy markii ugu dambeysay oo ay ka soo muuqatay xaflad bashaal ah oo ku taal xeebta xeebta. Waxay muujineysaa in kasta oo ay uur leedahay, haddana waxay maamushaa inay sii ahaato qaab. Wax lamid ah odaygii Miss France et Udhaf Yurub,Alexandra Rosenfeld, oo umuuqday mid qurux badan sawirkeedii ugu dambeeyay halkaasoo ay iyaduna muujineyso ku soo biirista bararka ilmaha.
Ugu wanaagsan ee xoogsashada hooyada toddobaadkan
Ka sokow clichés oo soo bandhigaya hooyooyinka, in badan oo caan ah ayaa ka soo muuqday carruurtooda toddobaadkan. Tani waxay si gaar ah u ahayd kiiska telefishanka dhabta ah ee TV-ga Jessica Thivenin. Gabadhii yareyd waxay istaagtay bartii ay wax kaga adeeganeysay iyada iyo ilmaheeda gacmaheeda. Dhinaceeda, Alyssa Milano ayaa ka soo muuqday sawir ay gashanayso qurxiyo iyadoo ilmaheeda gacmaha ku haysata. Layli aad u khatar badan oo ay aktaradu u aragto inay ku fiicnaato
Bandhig muuqaal ah oo ay soo jeedisay Anne-Laure Duvernet
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/florian-thauvin-et-charlotte-pirroni-bar-refaeli-alexandra-rosenfeld-le-best-of-1046739
Michael Jackson riyadii uu u dhibay Elizabeth II "waraaqo quus ah"
Royal Rift: Xariiq xanaaq badan ayaa kacday markii aad xanaaqday & # 039; shaqaaluhu waxay u dagaallamayaan buugga bamamka lagu tuuro ee Queen